မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် Snare အဖွဲ့ One Band Show အစီအစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် Snare အဖွဲ့ One Band Show အစီအစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း
မန္တလေးမြို့တွင် ယခုလအတွင်းပြုလုပ်မည့် Snare အဖွဲ့ One Band Show ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ယခင်က မတ်လဒုတိယပတ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲများပြီးစီးချိန်တွင် One Band Show ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှသာ ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”ဖျော်ဖြေပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာက တခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တွေက အခွေလည်းထွက်ထားသေးတယ်။ အခွေတစ်ခွေလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း မလွယ်ဘူးလေနော်။ အချိန်ပေးရတယ်။ အဲဒီအခွေပေါ်မှာပဲ အချိန် ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ ရှိုးပွဲကိုအချိန်သိပ်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ် သွားတယ်။ အခွေထွက်တဲ့အချိန်နဲ့ ရှိုးလုပ်မယ့်အချိန်ကအရမ်းကပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို မလုပ်လိုက်နိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဖျော်ဖြေပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ”ဟု Snare အဖွဲ့မှ တေးသံရှင် ဖြိုးလေးက ပြောသည်။
ယခုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သော One Band Show ဖျော်ဖြေပွဲကို ပြုလုပ်ပါက မိုးတွင်းအကုန် ပွင့်လင်းရာသီမှသာ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပြီး ရှိုးပွဲပြုလုပ်ပါကလည်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင်ပြု လုပ်ရန်အတွက် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။ Snare အဖွဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ‘ပူးတွဲချန်ပီယံ’ အမည်ရှိ အခွေထွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
အလှပြင်ဆိုင်မှ မိန်းကလေးများ အကြောင်း ရိုက်ကူးမည့် ''မျက်နှာဖုံးများ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ??
အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက် လုပ်နေရတာကြောင့် မျက်စိရေတိမ်ဖြစ်နေတာကို မကုသနိုင်သေးတဲ့ အေးဝတ်ရ?
ရန်ကုန် စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီချုပ်နှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁ဝ??
မက္ကဆီကိုမြောက်ပိုင်းတွင် လေယာဉ်ပျက်ကျ၊ လူအများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ